Xaalad adag oo Soo wajahday Xoola Dhaqatada Shabeelaha Hoose -
Shacabka Reemiiga ah ee ku nool Deegaanada ay Maamulaan Al-Shabaab ee shabeelaha hoose ayaa waxaa soo foodsaarat Xaalad adag oo dhanka duqeymaha ah.
Xoola dhaqatadan ayaa waxay sheegayaan in Marii ay timado duqeymaha diyaaradaha Maraykanka ay geysanayaan iyana dhibaatada dhankooda ku dhacdo.
Dhinaca kale shalay iyo xalayba waxaa Gobolkaas ka jiray duqeyn iyo dagaal dhaliyay khasaaro naf iyo Maalba leh.
Deegaanka Farsoolay shalay Galab waxaa ka dhacday Duqeyn 5 Qof oo Rayid ah ay ku geeriyoodaan Halka dhaawacana uu marayo labo qof.
Waxaa intaas dheer oo goobtaas lagu baabi, iyay gaari ay Wateen koox Shabaab ah.
Intaas ka dib Ciidan Shabaab ah oo caraysan ayaa waxay soo galeen Deegaanka Janaale waxaa la sheegay in meeshaas ay ku dileen 40 Neef oo Lo, ah waxayna Meesha ka ka xaysteen 50 Qof oo xaala dhaqato Ahaa.
Dadkaas ay wateen Al-Shabaab waxaa lasheegayaa in 9 Ruux oo kaliya ay ka soo fakadeen intii kale la,layahay Raq iyo ruuxba.
Ugudambeyntii habeen hore ayaa sidaan oo kale deegaan ku dhow Number 50 waxaa lagu dilay 13 Neef oo la,ah ka dib Markii dadkii lahaa Xoolahaas weerar lagu qaaday Awgeed naftooda labaxsadeen waxayna ku eedeeyeen falkaas in ay ka dambeeyaan Al-Shabaab.
Related Items:Featured, Xaalad adag oo Soo wajahday Xoola Dhaaatada Shabeelaha Hoose
Fanaanad Qaran oo Xalay Ku Geeriyootay Hargaysa